सोनाक्षीले भनिन्-मलाई ट्रोलको कुनै मतलब छैन! – Khabar Silo
आजभोलि कलाकारलाई पनि सुख छैन । फ्यान फ्लोइङमा बढी रमाउने यो जमातका लागि सामाजिक सञ्जालमा चल्तीमा रहेको ट्रोल टाउको दुखाइ बनिरहेको छ।
कलाकारले छिसिक्क केही गर्न पाएका हुँदैनन्, ट्रोल भाइरल बनिसक्छ।यसले नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई मलजल मिल्दै गइरहेको छ । तर बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले भने आफूलाई ट्रोलले फरक नपार्ने बताएकी छन्। यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ।
सोनाक्षी पछिल्लो समय ब्याकटुब्याक असफलताको घनचक्करमा फसेकी थिइन् । उनका ‘अकीरा’, ‘तेवर’, ‘नूर’, ‘हृयाप्पी फिर भाग जाएगी’, ‘कलंक’ र ‘खानदानी सफाखाना’ ले बक्सअफिसमा खराब प्रदर्शन गरेका थिए ।
‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छोले पनि लखेट्छ’ भनेझैं फिल्म असफल भएपछि सोनाक्षी पनि ट्रोलको खेदाइमा परिन् । जबकि ‘दबंग’ बाट नौ वर्षअघि बलिउडमा सानदार डेब्यु गरेकी यी अभिनेत्रीलाई त्यसपछिका उनका फिल्म ‘राउडी राठोर’, ‘सन अफ सरदार’, ‘दबंग २’ ले चुरीफुरी निकै बढाइदिएको थियो।
‘म कुनै पनि नकारात्मक कुराहरू र ट्रोललाई खासै ध्यानै दिन्न । बरु त्यसको बदलामा आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचाउँछु,’ सोनाक्षीले भनेकी छन्, ‘कलाकारको मात्रै हैन, जोकोहीको जीवनमा पनि उतारचढाव आउँछ । एउटा सामान्य मान्छेले पनि यसको सामना गर्नुपर्छ । तब न मान्छेको रूपमा विकास हुन्छ । ट्रोलर्स वा हेटर्स के भन्छन् ङ म यसको मतलब राख्दिनँ । किनकि म आज यहाँ छु । उनीहरू त्यहींको त्यहीं नै छन् ।’उनले आफूमा नकारात्मक टिप्पणीलाई बेवास्ता गर्न सक्ने खुबी रहेको दाबी गर्दै आफ्ना लागि काम महत्त्वपूर्णरहेको बताइन्।
भद्रगोल छोडेपछि भाइरल मुन्नीको पहिलो अन्तर्वार्ता, गायिकालाई टक्कर दिने स्वर, नाइँ नभनु लमा यस्तो अवतार….(हेर्नुहोस् भिडीयो)
काठमाडौँ भद्रगोलबाट बाहिरिएका जिग्री र पाँडेको टिमले नयाँ सिरियल “सक्किगोनि”निर्माण गर्ने भएका छन् जिग्री र पाँडे लगायत बाहिरिएका २१ जनाको टिमले असोज २ गतेबाट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने भएका छन् यो टिमले नेपाल टेलिभिजनसँग प्रत्येक विहीवार ८.५० बजेको समय समेत किनिसकेका छन् । भद्रगोलको पूर्व निर्देशकद्धोय कुमार कटेल जिग्री र अर्जुन घिमिरे पाँडेको अनुसार आफनै […]
नेपाली अभिनेत्री जेनिशालाई अचानक बलिउड अभिनेता मिथुन चक्रवर्तीले बोलाए मुम्बई
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री जेनिशा केसीलाई बलिउड अभिनेता मिथुन चक्रवर्तीले बोलाएको खुलासा भएको छ । चलचित्र ‘गिरफ्तार’ बाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरेकी जेनिशालाई मिथुनले बुम्बई बोलाएका हुन् । उनले धेरै नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । उनी पहिलो चलचित्रमा नै अभिनेता विराज भट्टसँग अभिनय गरेर चर्चामा आएकी थिइन् । हालै मुम्बईवाट फर्किएकी […]
डेढ महीनामा ६८२ चालक कारवाहीमा, ६ लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन